I-Farmville, eyona midlalo ye-intanethi yeyona ndlela ifanelekileyo - ii-Geofumadas
NgoSeptemba, 2010 ezintsha, Internet kunye neBlogs
U-Zynga ngumdali wee-intanethi, abaninzi babo ngexesha langempela. Zynga Sekudlulileyo iintsuku ezidlulileyo kule nto, kuba ndikhumbula ukuba ndibone ezinye zezinto eziqhutywa kwi-Yahoo kunye neZithuba; kodwa ngoku kubonakala ngathi zonke izinto ezinokuthi zikhutshwe umlingo we-Facebook obani ukuhlanganisana kwakho kwanda imihla ngemihla.
Iimidlalo ezininzi zeZynga zineengcamango ezifanayo, ngoko makhe sijonge kwiFasvilleville ukuba simangaliswe ngobuchule babakhi balo.
1. Ukudala Ngokuqinisekileyo, oku kukukhuthaza kakhulu kwiFundville, ephakamileyo kwisicelo se-Flash isebenza izinto ezikhula kumanyathelo okuqhubekayo kunye nomgangatho ophezulu wokubonisa imifanekiso.
I-Farmville ayilona wonke umntu, kodwa wonke umntu othandayo uyaxhalaka, kwinqanaba elithile kufuneka lichaze imilinganiselo ukuba ingathinteli eminye imisebenzi. Oku, i-Zynga iyakhuphazela ngenxa yobuchule bokudala obuya kushiya bukrakra - nomona - kunoma ubani oye wazama ukusebenzisa inxaxheba kumashishini e-intanethi.
Abasebenzisi ngexesha bafumana amaqhinga okukhula, abingelelo phakathi kwemveliso, i-aesthetics, imali yokugcina imali, ukuthenga okunyanzelisayo kunye nokwaneliseka kokuphumelela ... bonke ukusuka kumdlalo.
3. Uhlaziyo Farmville koqobo azikho wit nje, ukuba bacinge ukuba babe ezimbini ezinoboya kuxelela iikomityi ikofu kunye intsangu icuba cranear kuphela yintoni iindaba lityhale umdlalo yonke imihla. Okwangoku kwiinyanga ezimbini zokugqibela uye wakwazi ukubona izinto ezifana noku:
Intsebenziswano, apho abasebenzisi abaninzi banokusebenzisana kunye, ngokutshintshela iilori ezinobomvu kunye nemali engaphezulu.
Imveliso yokuvelisa, eyayibuyisela ukungaboniyo ngabasebenzisi ekuthengeni iimveliso kwiindawo zokuthengisa ezithelene nabo, ngokutshintshiselwa amaninzi amaninzi kunye nemali. Ukudlula, ukuphinda uphinde usetyenziswe kwimveliso yewayini, i-spa okanye i-bakery, nganye ikhula ngokukhula kancane.
I-pigsty, ukuba ikwazi ukuphinda ibuyisele i-surplus kwaye ithumele ii-piglets ukuba zikhangele i-truffles. Oku kukuphucula ukusetyenziswa kwezinto eziseleyo kunye nomonde okufunekayo ukubona iminquma imithwala iziqhamo.
Ukukhula kwezithuthi, ezinokufakwa kwigalaji, ukwandisa amandla abo okufikelela. Ngaloo ndlela, ukuba unayo i-fuel, uhlakulela kwaye uvune kwiinkcazo ezimbalwa kwifama yezolimo ze-500.
Ukwandiswa kokugcinwa, ngokusebenzisa umngca obonakala ungenamkhawulo wokugcina zonke iimpahla ezishiyekileyo kwaye ukuba kunzima ukuthengisa nge-5 pesos.
Le mizekelo nje imimiselo ezalwe ngamanani, ukufuna ukuba abasebenzisi basebenzise yonke impawu yemidlalo. Ukukhula kwamanqanaba, kubasebenzisi abaye bahamba ngokuphantse nge-80 bekunjalo, kwiimeko eziqhubekayo. Le ubuqambi ushukumisa zombini umsebenzisi entsha kwaye onamava uyolo kokuchitha eninzi imali ipomakazi lendlu enkulu asithabathele wona emva kweentsuku ezimbalwa ethengisa mveliso kunye wakhe wokuvuna zokutyala enexabiso eliphezulu imakethi elinikiweyo.
Kwaye yonke into ngumdlalo ...
Umzekelo onomdla wokwakha kunye nokusebenzisana nabasebenzisi. Bahlala beqhagamshelana nokulungiswa kweebhugi, ezihlala zilahleka iinkomo, iimpazamo zokuvumelanisa okanye iinkqubo zokuhlaziywa ngokukhawuleza.
2. Inzuzo Nabani na owayeva umzekelo wefama wasePassville etafileni wabuza:
Yaye yintoni ibhizinisi elingaphambili?
Lo mdlalo ukuze aphezulu ukuthuthela lithemba, ukutshintsha dollar inani lamatikiti virtual ezinokuthatha-moya encinane ukuba ukubhabha kukhula izityalo kwindawo yesibini na isilingo. Ingathengwa kwiiphakheji ukusuka kwidola enye ukuya kwi-50, ngekhadi lesikweletu, i-Paypal okanye ukukhululwa kwamaphuzu kwezinye iinkonzo.
Izigidi zabasebenzisi abasebenzisa imihla ngemihla iFasville ngaphakathi kwe-Facebook, ngokuqinisekileyo yenza uninzi lweefowuni kwi-panel yolungileyo. Yaye ukuba udlala kwiFasvilleville, kukho iintengiso ze-AdSense kwindawo enye, kunye nenzuzo yokuba kukho indawo eninzi kunye nezinye izinto ezinganikwa kuphela apha. Kukho neFamaville yokuhamba.
Ukuhamba komsebenzi xa ofisi Zynga kufuneka umdla kakhulu, phakathi kwisebe uyilo kunye nokuthengisa, apho iindaba yetafula bocetean, abayili Adobe Illustrator ne Flash unika uyakholiswa ubuchule babo, badwelisi benkqubo umaleko ukuphunyezwa ... konke kukuzonwabisa.
3. Iqoqo I-Farville ithandwa, kuba abasebenzisi bayayithandwa. Kukho abantu abangakaze babonane ngomntu, nokuba bangazange bavelele ngaphambili kwi-Facebook, kodwa ngokubambisana kwalo mdlalo -Ndixelelwe- ziye zaphucula ukungafani kwazo.
Umzekelo onomdla ube yizizathu, ezifana nokuqokelela izixhobo ezincedo kwiiHaiti. Eli phulo lusekwe kwinjongo, ukuba ukuba iminikelo ye-400,000 yenziwe phakathi kwabasebenzisi, iZynga uza kunika idola ye-100,000 kule projekthi. Ukutshintshisana abantu bahlenga izipho zabo ngamabhaso amahle abelwe kwikhonkco elicwangcisiweyo.
Nantsi ndiyishiya imizekelo yeefama, ezinye zazo zibonisa, zilula kwaye zihlelekile. Abanye banomdla, kodwa bavelisa. Ngethuba lokubhalwa kweposi, elo lizinga abanalo.
Ye84, de kube umatshini uxhomeke. Kwinqanaba leenkcukacha, yonke into isendaweni yayo, nangona kufuneka kube nzima ukuba ungabikho indawo yokugcina i-calache eninzi.
Ye82, uyilo olulula, ifama elivelisayo. Ukuba usondela, icandelo ngalinye lidibanisa indawo encinane. Iiyure kunye no-hor
njengoko ushukumisa ucingo ukuze ujabule.
63. Unzima kakhulu, kunye nezinja ezikrakrayo zikuxosha ngokukhawuleza. Kwinqanaba leenkcukacha ezikufutshane, ezintle kakhulu.
54. Sithi le mveliso. Idijithali edibeneyo kwinqanaba yenza ukuba isebenze ngokukhawuleza kwaye ayijikelezi ngefama.
Ye53, iinkcukacha ezintle kunye nekhofi yangemvelaphi.
Ye47, akukwazi ukuba yintoni i-cellar.
Ye29, Ndifuna ukukubona xa ndikho kwi-70.
Ye22, kuhamba ...
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Microstation Geographics, qhagamshela kwiDatabase
Post Next Ukujonga kwi-Mobile Mapper 100Okulandelayo "
Iimpendulo ze-13 kwi "Farmville, i-intanethi yeyona intlalo ye-intanethi"
Ukuba uthanda ukubiza abahlobo bakho kwamanye amazwe kwi-Skype, unendlela ezininzi zokuhlawula. Ndicinga ukuba kukho ukukhushulwa nyanga zonke apho uhlawula intlawulo echanekileyo kwaye ungabiza ngaphandle kwelinye inyanga. Ndiyincoma kumhlobo ovela eMzantsi Melika ukuba afunde kwaye ufuna ukubiza intsapho yakhe rhoqo, ngoko kuthetha ukuba unxibelelwano oluncinci kunezandi ezivela kumhlaba ophantsi komhlaba. Kukho iintlobo ezininzi zokuhlawula ezifana namakhadi-mboleko kunye nokuhlawulwa kwangaphambili ongayithengela kwiivenkile okanye kwiofisi yokuposa!
Le nto ye-Skype iyamangalisa! Yintoni endiyenzayo ukuba ndiyibeke imali kwi-akhawunti yami? Ndiyisebenzisa le nkqubo ininzi kumnxeba. 🙂
Nge-paysafecard awukwazi ukuhlawula kuphela imidlalo ekhompyutheni. Kwakhona kunokwenzeka ukungena izindlu ezininzi zokubheja umzekelo. ukuba unomdla kuloo nto:
Unokuhlawula kwakhona izinto ze-skype-type.
Page Online Imidlalo ezingaphezu kwe 30000 imidlalo onke Semans ihlaziywa, wayefuna comprartirla into elungileyo kakhulu kwaye simahla, ukongeza kwizicelo ezamahala eliwaka, iiwebhsayithi kunye nobhaliso engachananga. http://www.wallsocial.com
Ndiyabonga kakhulu iimpendulo zakho!
Kulungile, ngoko kusasa kusasa ndiya kuthenga enye yamakhadi ahlawulwe. Ndixelelwe ukuba bathengiswa ngeposi kunye, kwaye ndinayo i-imeyile kufuphi nendlu yam. 🙂
Kodwa ngaba uyazi ukuba ungayisebenzisa ezinye izinto ngaphandle kweemidlalo?
Kuya kuba ngumcimbi wokuzama. Nangona kunjalo kubonakala kum ukuba ukuba unakho ukuhlawula i-farmville kunye ne-aquarium evuya kunye nekhadi, kufuneka ibe yinye enye imidlalo, akunjalo?
Ndicinga ukuba unokuhlawula nayiphi na umdlalo we-facebook kunye ne-paysafecard. Enyanisweni, ndizame eFundville naseHorari Aquarium. isebenza kakuhle, sele ndine-farmcash kunye neeparele 🙂
Ewe, kungcono ukuhlawula nge-paysafecard.
likhuselekile, kuba awushiyi ulwazi lwakho lomntu kwiwebhu. Andiyithembi kumakhadi-mboleko!
Ndiye ndihlawula nge-paysafecard ixesha elide kwaye andikaze ndibe neengxaki.
ewe, kwifama yaseville ungasebenzisa paysafecard ukuhlawula. Akukho sidingo sokusebenzisa ikhadi letyala okanye lokuhlawula. Ngena nekhadi elihlawulelwayo uze uhambe!
Kuya kufuneka usebenzise ikhadi letyala, okanye imali oyidlulisela kwiakhawunti yePaypal.
Ndiyayithanda le mdlalo, ndichitha iiyure ndidlala eFasvilleville.
Ngoku ndingathanda ukuthenga iFama-cash, umhlobo undixelele ukuba usebenzisa i-Paysafecard kodwa andiyazi ukuba yonke into isebenza ngayo.
Ngaba kukho umntu owaziyo ukunceda?
Ndiyabonga kakhulu kwangaphambili!
Andifuni nokuba ndizame ngenxa yokuba ndiqinisekile ukuba ndiyilwa